Ny fahasamihafana misy eo amin'ny 1,2-propanediol sy 1,3-propanediol amin'ny cosmetika
Propylene glycol dia zavatra hitanao matetika ao amin'ny lisitry ny akora fanosotra ampiasaina isan'andro. Ny sasany antsoina hoe 1,2-propanediol ary ny sasany dia propanediol 1,3, ka inona ny fahasamihafana? 1,2-Propylene glycol, CAS No. 57-55-6, formula molekiola C3H8O2, dia simika ...
Miorina poly sodium metasilicate (APSM)
Ny vokatra fanao isan-taona an'ny 50000 taonina vita amin'ny sitroka sodium vita amin'ny lamina, dia amin'ny alàlan'ny fanamainana tifitra tilikambo. Powdery, ny hery misintona manokana dia azo ahitsy arakaraka ny takiana. Ny vokatra dia detergent tsy misy fosforôly mahomby sy haingana, izay ...
Ny fahombiazan'ny CPC VS Triclosan sy ny fahombiazany. Triclosan dia miasa amin'ny fametahana nify, fa tsy ho an'ny vokatra fanasana, ary ny fanadihadiana dia naneho fa tsy tsara lavitra noho ny savony fotsiny. Raha ny fifantohana dia manana fomba fiasa matanjaka kokoa ny CPC noho ny triclosan. CPC: tohodrano sakana ...
Fampandrenesana ny fahatongavan'ireo vokatra nafarana: Triclosan
Hatramin'ny nananganana ny Suzhou Springchem, dia nanao ny fanafarana sy ny fanondranana asa manokana ataon'ireo ozinin-trano izahay. Miaraka amin'ny areti-mandringana satroboninahitra vaovao tao anatin'ny roa taona lasa, mifanaraka amin'ny fiaraha-miasa feno amin'ny asa fisorohana ny valanaretina manerana ny firenena, ary ny iraky ny t ...
2021, Kunshan China mpivarotra dia manafatra ny fivorian'ny fivondronambe sy ny fifehezana ny areti-mifindra
Amin'ny volana aogositra 2021, Suzhou Springchem, ho iray amin'ireo orinasam-panafarana 66 lehibe ao Kunshan, dia handray anjara amin'ny Fihaonambe Fanaparitahana sy fanaraha-maso Epidemika amin'ny Import Goods izay nokarakarain'ny Birao fampiroboroboana ny varotra Kunshan. Noho ny fiparitahan'ny valan'aretina Nanjing dia ...
Springchem miaraka aminao amin'ny 2020
Isika rehetra dia miaina ny fiantraikan'ny Coronavirus (COVID-19). Springchem dia mandray ny andraikiny amin'ny fanarahana ny torolàlana nomen'ny WHO (Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana) Ny ekipanay dia manohy manara-maso akaiky ny toe-javatra mivoatra haingana hanatsara ny fepetra sy fepetra ilaina. ...
MECHANISME ACTION_ Karazan-tsarimihetsika sy fanombatombanana ataon'ny PRESERVATIVES
Ity ambany ity dia fampahafantarana fohy momba ny mekanisma, ny karazana ary koa ny fanombanana ny fanangonana preservatives isan-karazany. .
Fandrosoana vao haingana amin'ny fandrosoan'ny fikarohana ataon'ny preservatives
Araka ny fikarohana efa misy, ny preservative mandaitra mazàna dia asongadin'ireto toetra manaraka ireto: 鈥 Misy fiantraikany lehibe amin'ny fanasitranana isan-karazany amin'ny karazana zavamiaina bitika tsy voafetra fotsiny amin'ny bakteria, fa koa amin'ny toetran'ny fanoherana ny holatra. 鈥 Mahomby tokoa na dia amin'ny l ...
7 karazana famonoana otrikaina simika sy ny fampiasana miavaka ananany
Ny Festival Spring tamin'ny taona 2020 dia teboka niova ho an'ny vahoaka sinoa. Vao avy nankalaza ny Taombaovao dia tsy maintsy niady tamin'ny Covid-19 izy ireo. Na dia tao anatin'izany fotoan-tsarotra izany aza, ny tsirairay dia nisafidy ny hiray hina ary hanohy ny adidiny mahazatra mba hitazomana ny hoavin'ny firenentsika. Suzho ...
Fahombiazana lehibe ny fandraisanay anjara tamin'ny Expo CPHI China 2020
Nandritra ny taona maro, ny indostrian'ny pharmaceutika dia nitombo be tokoa niaraka tamin'ny firongatry ny fiantraikany niely nanerana ny firenena rehetra manerantany. Miaraka amin'ny ambaratongam-piainana goavana toy izany manerantany, izany dia famantarana fa ny indostrian'ny pharma dia manana zavatra betsaka hatao mba hahazoana antoka fa maharitra ny fiainana eto ambonin'ny planeta ...
4-chloro-3,5-dimethylphenol (PCMX): Agenan'ny mikraoba
Ny antimicrobial agents dia singa iray afaka manakana ny fitomboan'ny microorganism amin'ny media rehetra. Ny sasany amin'ireo antimicrobial agents dia misy alikaola benzyl, bisbiquanide, trihalocarbanilides, phenol ethoxylated, surfactants cationic, ary compound phenolic. Mpikambana antimicrobial Phenolic toy ny 4-chloro-3,5-dimet ...
Springchem dia mirary ny fetin'ny lohataona rehetra ho an'ny mpanjifa
Firenena misy foko maro i Sina ary ny foko isan-karazany dia samy manana ny taonan'ny Taom-baovao. Mivory indray ny fianakaviana. Mihinana mofom-bary, dumpling ary karazan-tsakafo manankarena ny olona, ​​mampirehitra jiro, mamono afomanga ary mifampitsodrano. Tamin'ny fiandohan'ny taona vaovao, Springchem ush ...